မိန်းကလေးများကိုယ်.သိက္ခာကိုယ်မှမထိန်းဘယ်သူကထိန်းမှာလဲ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မိန်းကလေးများကိုယ်.သိက္ခာကိုယ်မှမထိန်းဘယ်သူကထိန်းမှာလဲ?
Posted by ရွှေဘိုသား on Jan 31, 2011 in Myanma News, News | 11 comments
နောက်ပိုင်းမကြာမကြာကောင်လေးဆီလာတယ်နောက်ပိုင်း Living Together အဆင်.ထိဖြစ်သွားတယ်။
အောင်မလေး နာဇီပါတီနှစ်ထောင့်ကိုးရယ် …
ရှင်က နွားမရွှံ့ ပိတ်တွေပဲ မြင်တာကိုး ။
etoneလို၊ဆူးလို ၊ မဝေလို၊ မနောလို ၊ နွယ်ပင်လိုမျိုး အမျိုးကောင်းမိန်းမတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် ။ တစ်ချို့ မိန်းမတွေက ဘ၀ကိုလွယ်လွယ်ဖြတ်သန်းကြတယ် ။ အနေချောင် ၊ အစားချောင်ရင် ပြီးရောဆိုတာမျိုး နဲ့ ဘ၀သာယာမှူကို ရှာတတ်ကြတယ် ။ အခုခေတ်မှာ ပိုဆိုးလာပါပြီ … စာရေးသူပြောတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးရှားလာတာလည်း သတိထားမိပါရဲ့ … ကိုယ်က စေတနာနဲ့သွားပြောလို့ ပြင်ရင်ကောင်းတယ် ၊ မပြင်ပဲ သူမနာလိုလို့ လာပြောတယ် အဆဲခံရရင် ကိုယ်ပါ အရှက်ကွဲမယ်… ။ သူ့ထိုက်နဲ့ သူ့ကံပဲ … လွှတ်ထားလိုက် ။ အဲ့ဒီလို မိန်းမတွေကို အထင်ကို မကြီးဘူး …။ မိန်းမတွေ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင် ၊ ဘီယာဆိုင်ထိုင်တာကို အပြစ်မပြောပါဘူး …. ။ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ မီနီစကတ်ဝတ်ပြီး ဖြဲကားထိုင်နေတာမျိုး ၊ ဘီယာဆိုင်မှာ အံဖတ်ဆို့မတတ်မူးနေတာမျိုးတွေကြတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ ။ ယိုသူမရှက်မြင်သူရှက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုး မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ အွန်လိုင်းကနေပဲ တိုက်တွန်းပါတယ်… (အပြင်မှာပြောရင် ဆဲခံရမှာစိုးလို့ )
အွန်လိုင်းကနေ သတိပေးမှပဲ အမျိုးကောင်းစာရင်းဝင်တစ်ယောက်ကျန်ခဲ့မှန်းသိတယ်… ။ အာဖျံကွီးလေးပါ … အဟဲ ။
တခြားသူတွေလည်း ရှိပါတယ်… ။ မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ရင် ဘယ်သူမှ အထင်မသေးရဲပါဘူး ။
အခုခေတ်က ယောက်ျားကောင်းတွေအတွက် မိန်းမကောင်းရှားသလို …
မိန်းမကောင်းတွေအတွက်လဲ ယောက်ျားကောင်း ရှာမရတဲ့ခေတ် …
ဘ၀ကိုတစ်ယောက်တည်းလျှောက်လှမ်းဖို.ဆိုတာလဲ … လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်လို. …
ကွီးကွီးကိုထောက်ခံတယ် ပြောတာမှန်တယ် ကြည့်ရွေး ကြည့်ကြိုက် ကြည့်ကြပ်သာလုပ်ကြဗျာ
စာရေးသူပြောတဲ့ မိန်းကလေးတွေက သူတို့ကြီးပြင်းလာရတဲ့ အနေအထား ဆုံးမပဲ့ပြင်မူ နဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့ထင်တာပဲ ဒါပေမဲ့ ဒါက မိန်းကလေးတွေထဲက ရာခိုင်နှုန်း အနည်းငယ်လောက်ပါ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် တန်ဖိုးထားပြီး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း နေတက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေလဲ မရှားပါဘူး .
ရှုပ်ရှပ်ခက်နေတာပဲ နာဇီရယ်။ ကိုကြောင်ဆီသာ ပို့လိုက်တော့၊ ကြည့်ကျက်ဆုံးမလိုက်မယ်။ မင်းသူငယ်ချင်းဖက်က ပြတ်ဖို့တော့လိုတယ်နော၊ ကြောင်ကြီးကချစ်သူပဲလိုတယ်၊ ရန်သူမလိုဘူး။
အိတုန်ကလည်း ရင်ငြိမ်းနွေး လည်းပါသေးတယ်လေ
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ မိဘတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ဆုံးမ ဆုံးမ ကိုယ်တိုင်က အသိတရားရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဘာလုပ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ အတွေးကို အရင်တွေးပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်အရာမဆို လွယ်လွယ်မဆုံးဖြတ် လွယ်လွယ်မလုပ်ဖြစ်ကြတော့ပါဘူး။ အမှားအမှန်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ အရာရာကို ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုပြီး သတိနဲ့ အသိ ရင်မှာထားထားရင် အဆင်ပြေမှာပါ မိန်းကလေးမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ယောက်ျားလေးတွေကရော မိန်းကလေး လာတိုင်း သူတို့မပါဘူးလို့ မပြောစေချင်ပါဘူး။ လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်တတ်တဲ့အမျိုးပါ။ ဒီတော့ ယောက်ျားလေးလည်း စဉ်းစားဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ မခေါ်ပဲလာတယ်ဆိုရင် သူ့မိဘတွေကို အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ပြောပြသင့်ပါတယ်။ ခုတော့ သူတောင် လာသေးတာပဲ ငါက ယောက်ျားလေးပဲဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ရှိနေလို့လည်း မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်နေကြတာပဲပေါ့။ ဒီတော့ ဘယ်သူမပြု မိမိမှု နောက်တစ်ချက်က ဒါတွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အရာမဆို ကိုယ့်အတွက်သူ့အတွက် စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်စေချင်ကြောင်း မနော စေတနာအရင်းခံနဲ့ ပြောလိုက်ပါရစေ…………..
(အပြင်မှာ ပြောရင် နင်က ဘာကောင်မမို့လို့လဲဆိုတဲ့ အပြောလာမှာတော့ ကြောက်တယ် :P)
ကိုနာဇီရေ၊ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးဆိုတာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိပါတယ်… အစ်ကိုပြောသွားတဲ့ ပထမ ဖြစ်ရပ်မှာ မိန်းကလေးက ယောက်ျားလေး ခေါ်တိုင်း လိုက်စရာလား၊ မစဉ်းစားဘူးလား လို့ အစ်ကို ပြောချင်ပုံရပါတယ်… ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာ ကို ပြောပါမယ်… တကယ်တော့ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့၊ ခင်၊ သံယောဇဉ်ဖြစ်ပြီး အပြင်မှာ တွေ့ဖို့ ချိန်းတာဟာ ဒီဘက်ခေတ်မှာ သိတ်မထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုပါ… ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းသွားတွေ့တဲ့အခါ မထင်မှတ်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်… ချိန်းတဲ့ ဘက်က ယောက်ျားလေးကလဲ ကြိုတင်အကြံအစည်နဲ့ မိန်းကလေး အလစ်မှာ ဆေးခပ်တာ၊ စိတ်ကြွဆေး တစ်ခုခု သုံးလိုက်တာလဲ လုပ်မယ်ဆိုရင် လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်… အတွေ့အကြုံ နုငယ်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို မာယာပရိယာယ်ကြွယ်ကြွယ် စကားလုံးတွေနဲ့ သိမ်းသွင်းပြီး စည်းရုံးတာ မျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ အဲသည်လိုပဲ မိန်းကလေး ကိုယ်တိုင်က စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ငြင်းပယ်ဖို့ အားနာနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်သလို၊ အတွေ့အကြုံသစ်မို့ စူးစမ်းချင်စိတ်ပေါ်လာတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်… ဒီထက် သူတို့ ကိုယ်တိုင်က ရေလာမြောင်းပေးလုပ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ချေထဲမှာ ပါပါတယ်… မည်သူ့ကိုမျှ အပြစ်ပြောလို့မရပါဘူး။ အဓိကကတော့ ကိုယ်ကျင့်တရားပါပဲ၊ ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် ယောက်ျားလေး တိုင်းကို အကျင့်မကောင်းဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး၊ အချို့လောက်သာ မကောင်းကြတာပါ၊ ဒီလိုပဲ မိန်းကလေးတိုင်းလဲ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး၊ အကျင့် မကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေလဲ ရှိပါတယ်… တကယ်တော့ လူငယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုနည်းသေးတော့ မှားနိုင်ကြပါတယ်.. ကျွန်တော်ဆိုရင် အွန်လိုင်းမှာ မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းနဲ့ အပြင်မှာ ချိန်းတွေ့ဖူးပါတယ်… ပထမဆုံးအကြိမ်က အရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လို စမိတ်ဆက်ရမှန်းတောင်မသိလောက်အောင် စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ဘူးပါတယ်… ဒီလိုပဲ ကောင်မလေး ဘက်ကလဲ အရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ် ဆိုတာ သတိထားမိပါတယ်… အဲသည်တုန်းက ကျွန်တော်ဘာပြောပြော သူမမှာ ငြင်းပယ်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး၊ ကျွန်တော့်ကိုအားနာတာရော၊ သူကိုယ်တိုင်ကိုက စိတ်လှုပ်ရှားတာကြောင့်ရောလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်… အဲသည့်အချိန်မှာ ကျွန်တော်သာ သူ့ကို မရိုးမသားအကြံအစည်တစ်ခုနဲ့ အကွက်ကျကျ သိမ်းသွင်းမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်… ဒီလို ပါပဲ အစ်ကိုရေ… ယောက်ျားလေးဘက်က မရိုးမသားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးဘက်က မရိုးသားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလို ကိစ္စမျိုးက ဖြစ်နိုင်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ယေဘူယျအားဖြင့် ကြည့်မယ်ဆိုရင် တော့ ယောက်ျားလေးတွေက မရိုးသားတာ များမယ်လို့ထင်မိပါတယ်…
သူတိုလုပ်တာနဲ့ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ချစ်စရာအကောင်မလေးတွေ ပါထိခိုက်တော့မှာပဲနော် ဝေဖန်ပေးရမယ်ဆိုရင် ဂိုက်ပေး တော်တော် ကြမ်းတာပဲနော် သူတိုနောင် ဂိုက်ပေးမကြမ်းနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ရမှာက ဟိုလေ ဟိုဟာလေ သိပါတယ် ….အဲဒါ ပေါ့ အင်းအဲဒီနေရာကို အင်းကတေသာလောင် ပလိုက်ကြာလို